Klopp oo dhaar ku maray inuu sameyn doono wax walba uu ku samata-bixin karo Liverpool kulanka Bayern Munich – Gool FM
(Yurub) 12 Maarso 2019. Macalinka kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa balanqaaday inay bixin doonaan dadaal kasta ay kaga soo gudbi karaan Bayern Munich kulanka lugta labaad ee wareega 16-ka tartanka Champions League ay ku wada ciyaari doonaan habeen dambe ee Arbacada ah.
Liverpool ayaa is keeni doonta kulanka habeen dambe, kadib markii ay kulanka lugta hore barbaro kula soo gashay kooxda Bayern Munich garoonka Anfield, waxayna heystaan fursad ay kaga soo gudbi karaan kooxda reer Germany.
Hadaba kahor kulanka habeen dambe macalinka kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa sheegay:
“Waa inaan ugu horeyn qiimeynaa xaaladda jir ahaaneed ee ciyaartoyda, waxay noqon doontaa ciyaar aad u adag, kadib marka uu kulanka lugtii hore ku dhamaaday babar dhac goolal la’aan”.
“Waxaan sheegay in natiijadan ay inoo fiican tahay marka loo fiiriyo kooxda Bayern Munich”.
“Sababtoo ah waxay doonayaan inay bedelaan natiijada kulanka lugta labaad, halka aan anaguna nahay kuwo in badan dareensan xasilooni, waxaana isku dayi doonaa inaan u ciyaarno qaabkii nalagu yaqiinay”.
“Laakiin waxaan balanqaaday inaan sameyn doono wax walba ee aan ku gaari karno wareega siddeed dhamaadka ee tartanka Champions League”.
Zidane oo durba ka hadlay Cristiano Ronaldo